Timeline ထဲမှာ ကိုယ့် Page ကို Work အဖြစ်ထည့်လို့ မရဘူးဆိုရင် . . . – Hein Htet Kyaw
By Hein Htet Kyaw August 13, 2019 1 Min Read
ကျွန်တော်တို့ များသောအားဖြင့် Page အသစ်လုပ်ပြီး အဲဒီ Page ကို ကိုယ့် Timeline ထဲက Work မှာ ပြန်ထည့်ချင်ရင် ပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းလေးရှာပြီး လာသိမ်းထားတာပေါ့ xD
Set Facebook Page as Work.
အရင်ဦးဆုံး ကိုယ့် Timeline ထဲက About ကိုသွားပြီး Overview အောက်က Work and Education ဆိုတဲ့နေရာမှာ တွေ့တဲ့ Page တစ်ခုကို ထည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ Company Name နေရာကို Right Click ထောက်ပြီး Inspect Element ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ value အကွက်လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ Page ID ကို ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါပြီ။ Page ID ကိုတော့ ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ Facebook Page ထဲက About မှာကြည့်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
ပြီးသွားရင် Position မှာတော့ ကိုယ်တကယ်ထည့်ချင်တဲ့ Position ကို ထည့်ပြီး အခြား Information တွေကို လိုအပ်သလိုထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Save Changes ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ကိုယ်ပြောင်းလဲချင်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့။ xD
အရင်ကတည်းက ရှာနေတာဆိုပေမယ့် ခဏခဏ အပြင်ထွက်ရှာမနေရအောင် အခုလို note လေးရေးပြီး သိမ်းလိုက်ပါတယ် xD